HomeMethodsကိုယ့်ချစ်သူ ကောင်မလေးကို ပြုမှု ဆက်ဆံ သင့်တဲ့ အချက်မျာ
လူတိုင်း ကတော့ သာယာတဲ့ အချစ်ရေး ကို လိုချင် ကြတာ ပဲလေ…. အဲ့လို အချစ်ရေး သာယာဖို့ အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် စလုံး က လိုအပ် ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကောင်လေး တွေက ကောင်မလေး တွေထက် ပိုလို တယ်လို့ ပညာရှင် တွေက ပြောပြခဲ့ ပါတယ် ။ ကောင်လေး တွေသာ ကောင်မလေး တွေကို သည်းသည်းလှုပ် ချစ်ပြရင် ပျော်ရွှင် သာယာ ကြရမှာပါပဲ ။
ကိုယ်ကောင်မလေးကို ပထမဆုံး လေးစားမှု ထားပြီး ဆက်ဆံ ပေးပါ ။ ကိုယ့် ကောင်မလေး ကို ငါယောက်ျားမို့ ပြောချင်တာ ပြောမယ် ဆိုပြီး မလုပ်သင့် ပါဘူး ။ ကိုယ်က ယောက်ျားလေး ဖြစ်ပေ မဲ့လဲ ခုလို အေးအေး ဆေးဆေး လေး စကား ပြောဆိုမယ်…ဘယ်လိုလဲ ဆိုတော့ ညင်ညင် သာသာလေး စကားကို ပြောဆို ပေးရ ပါမယ် ။
ချစ်သူ ကောင်မလေး ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် က ပြုမှု ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ အမူ အရာတွေ ကို သိတက်ပါ…. သင် ပြုမှုတဲ့ ပုံစံ တွေ စကားပြောတဲ့ ပုံစံတွေကို သာ ကြိုက်ရင် သူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အမူအရာက တစ်မျိုး ဖြစ်နေပြီး စိတ်ဆိုး နေရင် တစ်မျိုး ဖြစ်နေပါ လိမ့်မယ် ။
ညီတူ မျှတူ သူ့ကို ဆက်ဆံပါ…. ရိုးသားပါ…. သူမကို စိတ်ပျက်စေ မိရင် တောင်းပန်ဖို့ ဝန်မလေး ပါနဲ့ ချစ်ရင် အလျော့ပေး လိုက်ပါ ။ သင်ဂရုစိုက်တယ် ဆိုတာကို ကောင်မလေး ဘက်က သိအောင်လုပ်ပါ…. သူ့ကိုသတိရတဲ့ အခါတွေ သူ အကြောင်းတွေ တွေးမိတဲ့ အခါ သူမဆိကို ရိုးရိုး တန်းတန်းလေး ” သတိရတယ် ကွယ်… ခုချိန် ဘာလုပ် နေလဲဟင် …. ကိုတော့ သတိရ လို့ လုပ်နေတဲ့ အရာတောင် စိတ်ထဲ မရောက် တော့ဘူး ” ဆိုပြီး အဲ့လို မျိုးစာတွေ သတိရတိုင်း ပို့ပေးပါ ။
ကောင်မလေး သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ ခင်မင်အောင် နေပါ…. ချစ်သူ ဖြစ်သူ ကောင်မလေး ကို Surprise တွေ လုပ်ပေးပါ ကြီးကြီးမားမား လုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး … ရိုးရိုးရှင်းရှင်း လေးပါပဲ ။ ချစ်သူနဲ့အတူ အချိန် တွေကို အတူတူ ဖြတန်သန်းပါ…. ကောင်မလေး ကို အချိန် ပေးပါ ။ ချစ်သူကောင်မလေး ကို ရုံးပိတ်ရက် တွေမှာ ချိန်းတွေ ပေးပါ . .. သူမ ဘက်ကလဲ ပျော်ရွှင် နေမှာပါ ။
ချိန်းတွေတဲ့ ခါကျရင်လဲ အတူတူ လျှောက်လည် တာတို့ ရုပ်ရှင်ကြည့် တာတို့ စသဖြင့်ပြုလုပ်ပေးပါ ။ တစ်ခါ တစ်လေ ကိုယ့် သူငယ်ချင်း အတွဲတွေနဲ့ ကိုယ့် အတွဲ အတူတူ ချိန်းတွေ့ ကြပြီး ညစာ အတူတူ စားပါ ။ အဲ့ခါ ကျရင် ဘာတွေ ဘယ်လို ဖြစ်သွားမလဲ ဆိုတာကို သိရ ပါလိမ့်မယ် ။
လူတိုငျး ကတော့ သာယာတဲ့ အခဈြရေး ကို လိုခငျြ ကွတာ ပဲလေ…. အဲ့လို အခဈြရေး သာယာဖို့ အတှကျ နှဈဦးနှဈဘကျ စလုံး က လိုအပျ ပါတယျ ။ ဒါပမေဲ့ ကောငျလေး တှကေ ကောငျမလေး တှထေကျ ပိုလို တယျလို့ ပညာရှငျ တှကေ ပွောပွခဲ့ ပါတယျ ။ ကောငျလေး တှသော ကောငျမလေး တှကေို သညျးသညျးလှုပျ ခဈြပွရငျ ပြျောရှငျ သာယာ ကွရမှာပါပဲ ။
ကိုယျကောငျမလေးကို ပထမဆုံး လေးစားမှု ထားပွီး ဆကျဆံ ပေးပါ ။ ကိုယျ့ ကောငျမလေး ကို ငါယောကျြားမို့ ပွောခငျြတာ ပွောမယျ ဆိုပွီး မလုပျသငျ့ ပါဘူး ။ ကိုယျက ယောကျြားလေး ဖွဈပေ မဲ့လဲ ခုလို အေးအေး ဆေးဆေး လေး စကား ပွောဆိုမယျ…ဘယျလိုလဲ ဆိုတော့ ညငျညငျ သာသာလေး စကားကို ပွောဆို ပေးရ ပါမယျ ။
ခဈြသူ ကောငျမလေး ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျ က ပွုမှု ဖွဈပျေါ နတေဲ့ အမူ အရာတှေ ကို သိတကျပါ…. သငျ ပွုမှုတဲ့ ပုံစံ တှေ စကားပွောတဲ့ ပုံစံတှကေို သာ ကွိုကျရငျ သူရဲ့ ခန်ဓာကိုယျ အမူအရာက တဈမြိုး ဖွဈနပွေီး စိတျဆိုး နရေငျ တဈမြိုး ဖွဈနပေါ လိမျ့မယျ ။
ညီတူ မြှတူ သူ့ကို ဆကျဆံပါ…. ရိုးသားပါ…. သူမကို စိတျပကျြစေ မိရငျ တောငျးပနျဖို့ ဝနျမလေး ပါနဲ့ ခဈြရငျ အလြော့ပေး လိုကျပါ ။ သငျဂရုစိုကျတယျ ဆိုတာကို ကောငျမလေး ဘကျက သိအောငျလုပျပါ…. သူ့ကိုသတိရတဲ့ အခါတှေ သူ အကွောငျးတှေ တှေးမိတဲ့ အခါ သူမဆိကို ရိုးရိုး တနျးတနျးလေး ” သတိရတယျ ကှယျ… ခုခြိနျ ဘာလုပျ နလေဲဟငျ …. ကိုတော့ သတိရ လို့ လုပျနတေဲ့ အရာတောငျ စိတျထဲ မရောကျ တော့ဘူး ” ဆိုပွီး အဲ့လို မြိုးစာတှေ သတိရတိုငျး ပို့ပေးပါ ။
ကောငျမလေး သူငယျခငျြး တှနေဲ့ ခငျမငျအောငျ နပေါ…. ခဈြသူ ဖွဈသူ ကောငျမလေး ကို Surprise တှေ လုပျပေးပါ ကွီးကွီးမားမား လုပျဖို့ မလိုပါဘူး … ရိုးရိုးရှငျးရှငျး လေးပါပဲ ။ ခဈြသူနဲ့အတူ အခြိနျ တှကေို အတူတူ ဖွတနျသနျးပါ…. ကောငျမလေး ကို အခြိနျ ပေးပါ ။ ခဈြသူကောငျမလေး ကို ရုံးပိတျရကျ တှမှော ခြိနျးတှေ ပေးပါ . .. သူမ ဘကျကလဲ ပြျောရှငျ နမှောပါ ။
ခြိနျးတှတေဲ့ ခါကရြငျလဲ အတူတူ လြှောကျလညျ တာတို့ ရုပျရှငျကွညျ့ တာတို့ စသဖွငျ့ပွုလုပျပေးပါ ။ တဈခါ တဈလေ ကိုယျ့ သူငယျခငျြး အတှဲတှနေဲ့ ကိုယျ့ အတှဲ အတူတူ ခြိနျးတှေ့ ကွပွီး ညစာ အတူတူ စားပါ ။ အဲ့ခါ ကရြငျ ဘာတှေ ဘယျလို ဖွဈသှားမလဲ ဆိုတာကို သိရ ပါလိမျ့မယျ ။
Gentleman Special Love Methods
အစာအိမ်အနာ ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ သိသင့်သည်များ..
သရက်သီး အကြောင်း တစေ့တစောင်း
သစ်သီး တစ်မျိုးချင်းစီအလိုက် ထူးခြားတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ
လက်ထပ် ပြီးစမှာ ၃ လခံထိုးဆေး သုံးသင့်သလား